प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ? Bizshala -
काठमाण्डौ । गत वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित ५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजित मूल्यअनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता सेयर ४००.९५ रुपैयाँ कायम भएको छ । अब समायोजित मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउनेछ ।
कम्पनीले गत आर्थिकाको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयरसँगै ११.३२ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) गरी कुल १६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश संस्थाको यही माघ २४ गते हुने २४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन हुनेछ ।
साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि कम्पनीले आज शुक्रबार एक दिनका लागि बुक क्लोज गरेको छ । यसको अर्थ हिजो बिहीबारसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र साधारणसभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्तिका लागि योग्य हुनेछन् ।
prabhu insurance limited price adjustment
काठमाण्डौ । गैरसरकारी संस्था, सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुले पनि...
जीवन बिमा कम्पनीले दम्पत्ति बिमालेख जारी गर्न नपाउने
काठमाण्डौ । श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एकजनाको बिमा गर्दा दुवैले...
तपाइँको इन्स्योरेन्स कभर पर्याप्त छ ? यी कुरालाई ध्यानमा
काठमाण्डौ । जब तपाइँको कमाइ खर्चभन्दा धेरै हुन थाल्छ तब पैसालाई...
सिद्धार्थ ईन्स्योरेन्स तथा रोटरी बीच सम्झौता
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ ईन्स्योरेन्स तथा रोटरी इन्टरनेशनल...
काठमाण्डौ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो २२ औँ वार्षिक...
'कान्छा सीइओ' विवेक झाको नेतृत्वमा नम्बर वान बनेको एनएलआइसी
काठमाडौँ । गाउँमा प्रजातन्त्रको पक्षमा एक प्रकारको लहर थियो ।...
नेसनल लाइफ: बिमा शुल्कमा ३०.२७%को छलाङ, जीवन बिमा कोषमा ३० अर्ब
काठमाण्डौ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक...
एलआईसीको खुद बिमा शुल्क साढे ७ अर्ब माथि, जीवन बिमा कोषमा
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडले चालु...